Lucky ianao - ianao efa nahita olona mahagaga izay mizara ny fitiavanao ny sarimihetsika, manana lehibe tia vazivazy, ary adores biby. Raha mandeha ianao lany andro alina sy ny hevitra efa nisafo tantaram-pitiavana rehetra ankalamanjana, nahoana no tsy hanao asa soa firotsahana amin'ny sasany toy ny mpivady, indrindra fa raha mampiditra efa hankafy fialam-boly? Ireto misy hevitra amin'ny fomba ahafahanao manampy avy, rehetra miaraka amin'ny fanampian'ny namanao:
1.) Photography: Hanafotra fialofana sy mamonjy matetika mila fanampiana Ny fisamborany kalitaon'ny sary ny amin'izao fotoana izao ny fananganana biby misy. Moa ve ianao na ny mpiara-miasa no mpampianatra ny Instagram, sa ianao tia mba hanazava ny ins sy outs ny Aperture? Mety ho mendrika lehibe ho anareo, ary afaka manova mora foana ny isan'ny biby ho natsangana. Contact ny fialofana mba hahitana raha dia afaka manolotra ny asa, ary mizara ireo tarehy mahafatifaty ao amin'ny tambajotra sosialy mba hanampiana azy ireo hahita trano.
2.) Cleaning: Marary ny clutter? Tena mora loatra ny hanangona zavatra maro toy ny mpivady, dia hanararaotra izao fotoana izao hanadio trano, ary manome zavatra ilaina eo an-toerana fialofana sy mamonjy. Towels, bodofotsy, gazety, vilia, placemats, sy ny maro hafa dia afaka manaporofo mahasoa rehetra ireo vondrona. Omeo azy ireo ny antso, ka jereo ny zavatra ilainy. Ianao hanampy azy ireo avy amin'ny fanaovana ny entana an-trano raha voalamina kokoa.
3.) Mahandro sakafo: Nanapaka avy hena sy / na ny biby liven ny vokatra dia afaka ny miara-misakafo. Jay-Z sy Beyonce nanao izany, ka nahoana no tsy ianao? Vegan sy ny zavamaniry maka amin'ny toerana tena lovia afaka lavitra kokoa ny pizza alina mahaliana, ary izany fomba fiaina manome fomba vaovao sy ny trano fisakafoanana culinary tsirony niainany. Ataovy izany ho an biby, ho an'ny fahasalamana, na fotsiny mampiditra vokatra bebe kokoa ao amin'ny fiaraha-misakafo. Na izany na tsia, fa mahasoa - sy matsiro!
4.) Travel: Moa ve ianareo roa tia mikapoka ny lalana? Moa mandeha eo amin'ny faniriany lisitra, nefa toa tsy ho hitrangan'izany? Maro fialofana sy mamonjy mila FITANTERANA eo ny toerana sy ny hafa na Foster mamonjy trano. Raha toa ianao mivoaka ny tanàna ihany, na raha toa ianao te-hahita foana ny faritra hafa ao amin'ny fanjakana, manolotra ny fitaterana biby, na dia ampahany fotsiny ny lalana.
5.) Zavakanto sy ny Crafts: Raha samy hitranga ho tia DIY tetikasa (ny saina rehetra sy ny Pinterest tia ry zalahy miaraka amin'ny fitaovana,) Avy eo izany dia mahafinaritra ho anareo tetikasa. Mbamin'ny olom-bitsy ary ny sasany zavatra Aza Tia Tena, dia afaka mora foana hanorina fialofana mangatsiaka na alika trano ho an'ny biby nania ao amin'ny fiaraha-monina. Izany no fitsapana lehibe koa ho an'ny fifandraisana, be toy ny Ikea fividianana. Raha samy tia kanto, mamorona ny sasany niara voarasa sy hanome azy ireo ny fikambanana tsy mitady tombontsoa biby lavanty eny na mampiasa ny fanentanana.
6.) Computers: Raha toa ka ianao teknolojia-savvy, tolotra mba hanampiana mamonjy na fialofana amin'ny pejy web famolavolana na ny vohikalan'ny tambajotra sosialy. Raha bilaogy, manoratra lahatsoratra sasany momba ireo fitaovana fiaraha-monina, na hanampy azy ireo hamorona blaogy avy ny.
7.) Fifaneraserana: Miasa any amin'ny trano fitaizana ao amin'ny Kentucky, ka afaka manome toky anao fa ny ankamaroan'ny mponina dia tsy mahazo mpitsidika maro. Raha manana biby izay manana ny toetra tsara noho izany ny asa tsipika, miresaka fitsaboana biby vondrona hanomboka ny dingana ny hahazo ny biby vonona ho an-tsitrapo. Fantatsika rehetra fa ny fomba fifaneraserana mampahery biby dia, ka nahoana no tsy manolotra izany amin'ny olona iray mila fampiononana? Diniho nanolotra ireo tolotra amin'ny herisetra an-tokantrano fialofana, Foster ankizy, ary hospice marary, koa. Aza mieritreritra saka sy ny alika ihany no afaka manao io asa io, na! Hitako bunnies, kisoa, ary na ny sokatra rehetra manao ny anjarany!
8.) Sports: Raha toa ka ianao sy ny vehivavy tena tiany tia hitoerana ho mavitrika, Diniho fandaminana sy ny fandraisana anjara amin'ny 5K amin'ny fanentanana amin'ny biby fiompy habibiana, na hanatitra handeha ny alika tao an-toerana fananganan-jaza hetsika. Angamba na dia hampiantrano ny alika "foko" na saka Superbowl handray soa eo an-toerana ny fiarahamonina vanona. Fikambanana mpanao asa soa manampy ianao amin'ny ezaka raha manana fahafinaretana, ary izany no ho fandresena-fandreseny.
9.) Mijanona ao: Ny biby toeram-pialofana feno ny alika sy ny saka mandrakizay izay mila trano, sy mamonjy ny vondrona mila haingana dia mamporisika ho an'ny biby ireo, mba hisorohana ny euthanasie. Raha toa ianao tsinona manana sehatra fanampiny hamahana biby vonjimaika, antsoy ny biby an-toerana fialofana sy mamonjy ny vondrona. Inona no tsara kokoa noho ny famonjena ny aina ary mahazo milalao miaraka amin'ny namana furry vaovao?
Mifalia asa soa ireo fialam-boly toy ny mpivady, ary fantaro fa miaraka ianao manao fiovana eo amin'ny fiainan'ny biby manodidina anao.